Adeeggeennu wuxuu sameeyey mucjisooyin badan
CMOAPI waxay bixin kartaa adeegyadan soo socda, kuwaas oo dhammaantood ay ku mideysan yihiin siyaasadahayaga adag ee ku saabsan ilaalinta Maskaxda Maskaxda (IP), in la hubiyo in mashaariicda loo maareeyo kalsoonida ugu adag mar kasta. Kobcinta Waddo isku-xirnaanta Nidaamka kor u qaadista Nidaamka kor u qaadista min garaam ilaa illaa Bixinta Taranka Metric haddii loo baahdo taageero falanqeyn buuxda oo ay ka mid tahay HPLC, GC-MS iyo NMR FTE adeegga Alaabada halka howsha wax soo saar ay horey u jirtay, CMOAPI waxay ku siin kartaa qandaraas qandaraas adeeg iyo warshadeyn qeexitaanka macmiilka. Marka lagu daro adeegyada aan kor ku soo sheegnay, waxaan sidoo kale bixinnaa adeeg takhasus leh oo ah adeegga dhadhanka ceyriinka ah (oo aan lahayn kharash dheeri ah) si loo hubiyo in, meel kasta oo ay suurtagal tahay, inaan kaliya u isticmaalno ilaha agab tayo sare leh sicirka suuqyada tartanku. CMOAPI waxay kaloo awoodaa inay bixiso khidmad cilmi baaris iyo adeeg horumarineed oo ku habboon shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Waxaan haynaa rikoor aad u wanaagsan oo ku saabsan xallinta caqabadaha isku-dhafan ee dabiiciga ah ee macaamiishayada iyo mashaariicda waxay ku saleyn karaan isbarbardhiga waqti-buuxa (FTE) ama heerarka maalinlaha ah. Nala soo xiriir si aad u ogaato sida kooxdayada R&D ee sida aadka u xirfadda leh ay uga dhigi karaan mashruucaaga xiga guushii ugu dambeysay.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, CMOAPI waxay bixineysay isku-xirnaan heer sare ah iyo adeegyada wax soo saar. Heerka adeeggayagu wuxuu u dhexeeyaa min milligram yar-yar yar ilaa tan oo tan oo ah adeegyo warshadeyn baaxad weyn leh. Inta badan macaamiisheenna waxay ku yaalaan Waqooyiga Ameerika, Yurub, Aisa, oo ay ku jiraan Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer iyo shirkad kale oo caan ah. Dhamaan farsamooyinkayaga casriga ah iyo adeegyada waxsoosaarka waxaa lagu sameeyaa shuruudaha sirta adag. Kooxaheenna mashruuca isku dhafan waxaa taageera koox khibrad sare leh oo u heellan farmashiistayaal kor u qaadaya. La shaqaynta reactors-ka leh heerkul u dhexeeya -100˚C illaa 300˚C, iyo iskeelka u dhexeeya 5L ilaa 5000L, qiimaha waxaa la siiyaa macaamiisha iyadoo la adeegsanayo isku-dubarid wax ku-ool ah oo dhex-dhexaad ah oo ah mashruucyo dhexdhexaad ah (illaa tiro metrik ton ah) iyo firfircoon dawooyinka dawooyinka. Wax soo saarista waxaa lagu sameeyaa xarunta wax soo saar ee ay wada leeyihiin. Waxaan u habeynnaa silsiladda sahayda ee kiimikada wax soo saarka si aan ula kulanno mashiinnadaada mashruuca gaarka ah oo leh xawaare aan fiicnayn iyo qiimo annagoo la kulanna heerarka ugu sarreeya ee nabadgelyada nidaamka iyo u hoggaansanaanta sharciga. Hawlaha wax soosaarka ee la hagaajiyay ayaa u oggolaanaya cabirrada dufanka leh ee dabacsan iyo tayada wax soo saarka. Dhamaan howsha waxaa loogu talagalay inay buuxiso heerarka sharciga adag.
CMOAPI ee daahfurka daroogada waa daruur ku saleysan, xalka garashada oo falanqeysa aqoonta sayniska iyo xogta si loo muujiyo xiriiryo qarsoon iyo qarsoon oo gacan ka geysan kara kordhinta suurtagalnimada horumarka sayniska. Madalku wuxuu u oggolaanayaa baarayaasha inay soo saaraan male-awaal cusub iyadoo la kaashanayo aragtida firfircoon, saadaasha-cadaymaha taageeraya iyo barashada luqadda ee dabiiciga ah oo lagu tababaray maaddada sayniska nolosha. CMOAPI ee Daaweynta Daawooyinka waxay dardargelin kartaa aqoonsiga murashixiinta daroogada cusub iyo bartilmaameedyada daroogada cusub iyadoo la xoojinayo awoodda xogta weyn.
Kooxdayada horumarinta kiimikada, oo ka kooban in ka badan 50 saynisyahano oo ku nool waddamadeenna, ayaa ka sarreeya filashooyinka xitaa mashaariicda ugu adag. Ka shaqeynta shaybaarka-farshaxanka-casriga ah ee lagu qalabeeyay geedi socodkii ugu dambeeyay iyo qalabaynta falanqeynta, waxaan si hufan u qabanaa kormeerka wadooyinka, hormarinta geeddi-socodka deg-degga ah, kor u qaadista xaaladaha jawaab-celinta ee kor u qaadista agabyada loogu talagalay tijaabooyinka saxda ah ama soo-saarka ballaaran. Iyada oo taageero laga helayo kooxdeenna khubarada ah ee falanqeeyayaasha, injineeriyada kiimikada iyo xirfadleyda QA, waxaan si dhakhso ah oo hufan u horumarineynaa hanaannada wax soosaarka ee la buufin karo si aan wax uga qabanno baahidaada.